Izikrufu zokuzilungisa ezenziwe ngentsimbi yekhabhoni eqinileyo okanye ngentsimbi engenasici zisetyenziselwa ukukhawulezisa. Ihlelwe yitayi yemisonto, zimbini iintlobo eziqhelekileyo zokugoba imisonto yokujija: intambo entle kunye nentambo erhabaxa.
Isikrufu sokhuni sisikere esenziwe ngentloko, i-shank kunye nomzimba onomsonto. Kuba yonke indawo ejijelweyo ayifakwanga ngomsonto, kuqhelekile ukubiza ezi zikrufu ngokuyinxenye ukuba kungumsonto (PT). Intloko. Intloko yesikrufu yinxalenye equlathe idrive kwaye ithathwa njengeyona iphambili kwisikrufu. Uninzi lwezikrufu zomthi ziintloko zeFlat.
Izikrufu ze-Chipboard zizikere zokuzibamba ezine-screw encinci. Ingasetyenziselwa usetyenziso oluchanekileyo njengokuqina kwee-chipboards zobunzima obahlukeneyo. Banemisonto erhabaxa yokuqinisekisa ukuhlala ngokugqibeleleyo kwesikrufu kumphezulu we-chipboard. Uninzi lwezikhonkwane ze-chipboard ziyazicofa, oko kuthetha ukuba akukho mfuneko yokuba umngxunya wokuqhuba ulungiswe kwangaphambili. Ifumaneka ngentsimbi engenasici, ikhabhoni yentsimbi, kunye nealumini yensimbi yokuthwala ngakumbi kunye nokukrazula ngelixa isenza ukuba inganyangeki ngakumbi.
Izikere ze-Drywall ezenziwe ngentsimbi yekhabhoni eqinisiweyo okanye ngentsimbi engenasici zisetyenziselwa ukukhawulezisa i-drywall kwizikhonkwane zeenkuni okanye kwizikhonkwane zentsimbi. Banemisonto enzulu kunezinye iintlobo zezikhonkwane, ezinokubathintela ekususeni ngokulula kwi-drywall.
I-anchor wedge i-anchor yohlobo lohlobo lwe-anchor enamacandelo amane: umzimba we-anchor yomzimba, ikliphu yokwandisa, i-nut kunye ne-washer. Ezi ankile zibonelela ngexabiso eliphezulu kakhulu nelingaguquguqukiyo lokubamba i-anchor yohlobo loomatshini
Iiankile zedrophu ziiankile zekhonkrithi ezingabantu basetyhini eziyilelwe ukubambelela kwikhonkrithi, ezi zihlala zisetyenziselwa ukusetyenziswa kwentloko ngenxa yokuba iplagi yangaphakathi ye-anchor iyanda kumacala amane ukubamba i-ankile ngokungagungqiyo ngaphakathi emngxunyeni ngaphambi kokufaka intonga okanye umsonto. Inamalungu amabini: iplagi ekhulayo kunye nomzimba we-ankile.
Isangqa sahlulwa kwinqanaba elinye kwaye sigobele kwimilo yokujikeleza. Oku kubangela ukuba i-washer isebenzise amandla entwasahlobo phakathi kwentloko ye-fastener kunye ne-substrate, egcina i-washer ilukhuni ngokuchasene ne-substrate kunye nomtya we-bolt onzima ngokuchasene ne-nut okanye i-substrate umsonto, ukudala ukungqubana okungakumbi kunye nokumelana nokujikeleza. Imigangatho esebenzayo yi-ASME B18.21.1, i-DIN 127 B, kunye ne-United States ye-Military Standard NASM 35338 (eyayisakuba yi-MS 35338 kunye ne-AN-935).
Iiflaya ezisetyenziselwa ukucoca zisetyenziselwa ukunyusa umphezulu wenathi okanye intloko yokubopha ngoko ke isasaza amandla okubamba ngaphezulu kwendawo enkulu. Zingaba luncedo xa usebenza ngezinto ezithambileyo kunye nemingxunya engaphezulu okanye emiselweyo.
Iibholiti zokuPhela eziPhindwe kabini
Iibholiti zokugqibela zokufunda ziziintambo ezinemisonto enomsonto kwiziphelo zombini ezinesahluko esingafakwanga phakathi kwezi ziphelo zimbini. Zombini iziphelo zinamanqaku atyibilikileyo, kodwa amanqaku ajikelezileyo anokubonelelwa kuzo zombini okanye zombini iziphelo kukhetho lomenzi, izikhonkwane eziphindwe kabini zenzelwe ukuba zisetyenziswe apho kufakwe khona esinye seziphelo ezifakwe kumngxunya ophephiweyo kunye ne-hex nut esetyenzisiweyo kwenye isiphelo sokubambelela isilinganisi kumphezulu wesitudiyo esifakwe kuwo
I-Oxidation emnyama yeHex Bolts, Amandla aphakamileyo eHex Bolts, Ukwaleka okuMnyama kweHex Bolts, Iibholiti, I-Hexagon Socket Head Bolts, Din6921 esisangqa Amandongomane,